Izicelo ze KDE 19.04.1 zikhutshwe kwiveki ephelileyo | Ubunlog
Izicelo ze KDE 19.04.1 zikhutshwe kwiveki ephelileyo
NgoMgqibelo odlulileyo, ngoMeyi 11, uLuntu lwaseKDE Kukhutshwa iKdenlive 19.04.1. Xa sasibhala malunga nokukhutshwa kwenguqulelo yamva nje yomhleli wevidiyo we KDE, sathi uhlaziyo lokuqala lolondolozo lwezicelo ze KDE luza. Besingalunganga: Izicelo ze-19.04.1 ze KDE iyafumaneka ukusukela ngolwesine wokugqibela Ngomhla we-9 kaMeyi. Ngesizathu esithile esingaziwayo, mhlawumbi ngenxa yokuba inkqubo yokwabelana ngokwasentlalweni isilele, khange sifumanise malunga nokuqaliswa ngomhla wayo, kodwa sele yenzekile.
En Oku kubhaliwe Sithetha ngemisebenzi emitsha eza kuvela kwisandla se-KDE Izicelo 19.04, phakathi kwazo esinokuthi siqaqambise iinketho ezintsha zoqwalaselo kwi-Spectacle, i-Okular iya kuba nakho ukuqinisekisa utyikityo lwedijithali okanye uphuculo oluza kuza eKonsole, i-Plasma application yesiphelo . Ezo ndaba ayizukukhutshwa ngokusesikweni kwi-Kubuntu 19.04Oko kukuthi, kusetyenziswa iinkqubo ezihlaziyiweyo zeCanonical kunye neendawo zokugcina. Kwaye ukuba inkampani eqhuba uMark Shuttleworth ihlaziya kuphela usetyenziso ukulungisa iimpazamo.
Faka usetyenziso lwe-KDE 19.04.1 kwindawo yokugcina izinto ezingasemva
Ngokubhekisele kwiindaba zokuba le nguqulo intsha ibandakanyiwe, yithi ilungisa kuphela iimpazamo, 125 zichane. Ukuba andikuqondanga kakuhle, kwaye ndicinga ukuba andikhange, Izicelo ze-KDE 19.04.x ​​zenza Ingafakwa kwi-Kubuntu ukuba sifaka indawo yokugcina izinto ze-KDE, ngendlela efanayo esinokuyihlaziya kuhlobo lwamva lwePlasma (okwangoku 5.15.5). Ukuyifaka, vula nje itheminali kwaye uchwetheze lo myalelo:
Ukuthathela ingqalelo ukuba kuthatha ixesha elingakanani ukwenza iinguqulelo zamva nje zePlasma zifumaneke kule ndawo yokugcina izinto, sinokucinga ukuba i-v19.04.1 ye-KDE Applications iya kufumaneka ukuba ifakwe kwi-Discover nanini na. Enye indlela yokuzifaka kukwenza ufakelo olwenziweyo, ekuya kufuneka ukhuphele kuzo iifayile zazo esi sixhobo. Ngokwam, kujongwa kuluhlu, ndicinga ukuba umntu sele edimazekile. Ngaba uza kufaka i KDE Izicelo 19.04.1 ngokukhawuleza?
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Izicelo ze KDE 19.04.1 zikhutshwe kwiveki ephelileyo
Olive, umhleli wevidiyo evulekileyo ekhangela indawo yakho
I-Chrome iya kukhusela ngokuchasene nokukhutshwa kwekuki yomntu wesithathu kunye nokuchongwa okufihliweyo